China Integration CSTR ifektri abakhiqizi | IBoselan
I-Integration CSTR, isicelo esivamile sohlobo lwethangi le-biogas, isibambi segesi ngaphezulu, ngezansi yithangi le-GFS. Inezinzuzo zokonga indawo ekuhlalwa kuyo nokusetshenziswa kahle kwesikhala, okuyimodi yohlelo lokusebenza ethandwa kakhulu njengamanje.
Iningi lazo lisetshenziswa emapulazini amancane (cishe imfuyo eyi-10000-20000) kanye nomkhiqizo wezolimo ozimele kanye namabhizinisi wokucubungula umkhiqizo. Inkampani yethu ingacacisa ububanzi, ukuphakama nombala womzimba wethangi ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ukusebenza okulula, ukusebenza okulula, asikho isidingo sezindleko zomsebenzi eziningi kakhulu, ukugcinwa nokusebenza kulula kakhulu. Kungukukhetha kokuqala kwabalimi abaningi ngisho namabhizinisi. Uma ufuna ukwazi ukukhethwa kosayizi othile nemininingwane enemininingwane, sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Ithangi le-GFS elizimele
Olandelayo: Ukwehlukaniswa kwe-CSTR